पोखरामा युवतीको रहस्यमय मृत्यू, ‘म पनि गण्डकीमा हामफाल्छु, सँगै जलाइदिनू’ चिट छाडेर श्रीमान् बेपत्ता
By: रञ्जन अधिकारी - आश्विन १६ २०७८ शनिबार १७:४५-
गत मंगलबार पोखरा वडा नं. १ अधिकारी टोल स्थित एक घरमा भाडामा दिइएको कोठाभित्रबाट दुर्गन्ध फैलियो । ढोकामा चाबी लगाइएको थियो । छिमेकीले थाहा पाए र प्रहरीलाई खबर गरे । ताला फोडेर हेर्दा युवतीको शव कुहिन लागिसकेको अवस्थामा खाटमै भेटियो । युवतीको घाँटीमा कसिएको डाम थियो । शवनजिकै ‘राधेराधे’ लेखिएको सल भेटिएको थियो । झ्यालहरू पनि लगाएर छाडिएकाले शव कुहिने अवस्थामा पुगेको थियो ।
ति मृतक युवती हुन्, बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका–१ बस्केनाकी १८ वर्षीया निरुता शाह । उनीसँग श्रीमान् गणेश विष्ट सोहि कोठामा बस्दै आएका थिए । २७ वर्षीय गणेश भने कोठामा थिएनन् । ३ दिन अगाडि नै उनले कोठा छाडिसकेका थिए । शव छेउमा उनै श्रीमान् गणेशले लेखेर छाडेको कागजको टुक्रा भेटियो । उनले आफू काममा गएको, ठेकेदारसँग पैसा मागेर फर्कँदा निरुता कोठाभित्रै झुण्डिरहेको अवस्थामा फेला परेको, त्यसपछि झुन्डिएको डोरी काटेर खाटमा सुताएर छाडेको उक्त चिटमा लेखेका छन् ।
पत्रको सार छः त्यो दिन ठेकदारसँग पैसा माग्न गएको थिएँ । कोठा फर्कंदा निरुतालाई झुण्डिएको भेटेँ र कपडाको पासोबाट छुटाएर राखिदिएँ । मैले उसका लागि घर परिवार त्यागेर पोखरा आएँ । टेस्ट गर्दा बच्चा नबस्ने देखिएपछि उनी दुःखी थिइन् । अब ऊ नै नबाँचेपछि म पनि बाँच्न सक्दिनँ । उनले मलाई छाडेर गइन् । म पनि बाँचेर अर्थ छैन । म गण्डकीमा हाम फाल्छु । मेरो लास गण्डकीमा फेला पार्नुभयो भने उसको लाससँगै जलाइदिनुहोला ।
निरुता र गणेश उक्त कोठामा भाडामा बस्दै आएका थिए । निरुता पढ्नका लागि कैलाली घोडाघोडीको सुख्खड बजारस्थित काकाको घरमा बसेकी थिइन् । कालीकोटको नरहरिनाथ नगरपालिका–१ घर भएका गणेश पनि सुख्खडमा आफ्नो दाइसँग बस्दै आएका थिए । सोहि बेला गणेश र निरुताको चिनजान भयो र पछि प्रेमसम्बन्धमा जोडिए ।
२०७७ भदौमा दुवैले भागेर विवाह गरे । गणेशले कालीकोटकै घरमा निरुतालाई लगे । गणेश ज्यामी काम गर्ने गर्थे भने निरुता पढ्न जान्थिन् । पछि उनीहरूको सम्बन्धमा दरार आयो । निरुता गत वैशाखमा आफ्नै घर बाजुरा फर्किइन् ।
उनको शरीरभरि नीलडाम थियो । गणेशले कुट्न थालेको माइती पक्षले थाहा पायो र छोरीलाई माइतमै राखियो । उसो त पहिल्यै निरुता र गणेशको सम्बन्धबारे दुवैको घरमा थाहा थियो । उनीहरूको सम्बन्ध दुवै परिवारलाई रुचेको भने थिएन । गणेशले कुटेर निरुता माइत फर्केपछि उनी अब घर नजाने बाचा गरेकी थिइन् ।
कैलालीमा रहेका गणेशले फेरि निरुतालाई पछ्याउन थाले । माया गरेर बिहे गरेको श्रीमान् सुध्रिएछ भनेर निरुता फेरि गणेशसँगै जिवन अघि बढाउन राजी भइन् । फोनमा कुराकानी बाक्लियो । छुटिएको ५ महिनापछि नै फेरि भेटे । त्यसपछि गणेशले निरुतालाई पोखरामा जाउँ, उतै काम गरौं, जीवन काटौँ भनेर फकाएर पोखरा ल्याए । उनीहरु पोखरा आएको यही भदौ २ गते मात्रै हो । उनले गणेशसँगै पोखरा आएको खबर आमा र दिदीलाई दिएकी थिइन् । त्यसपछि पोखरा १ अधिकारी टोलमा कोठा भाडामा बस्न थाले । यहाँ उनीहरुले कलैया घर भनेर वास्तविक नाम समेत नभनेको अहिले खुलासा भएको छ । गणेश दिनभरी ज्यामी मजदुरी गर्थे, निरुता कोठामै बस्थिन्, बाहिर छिमेकीहरुसँग पनि धेरै नबोल्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
मंगलबार एक्कासी छोरीको मृत्युको खबर सुनेपछि बुवा नन्दबहादुर शाह बाजुराको कोल्टी विमानस्थलबाट नेपालगन्जसम्म जहाजमा र नेपालगन्जबाट बस चढेर बिहीबार बिहान पोखरा आइपुगेका छन् ।
परिवार भन्छः सधैं कुटिरहने गणेशले मार्न नै यति टाढा पोखरा ल्याएको हो, नत्र चाबी लगाएर भाग्छ ?
निरुताको परिवार आफ्नी छोरीको हत्या नै भएको जिकिर गर्छन् । निरुताले आत्महत्या गर्नै नसक्ने उनीहरुको ठहर छ । बिहीबार पोखरा आइपुगेका नन्दबहादुरले गणेशविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा किटानी जाहेरी दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की श्रोतले जनाएको छ ।
बाबु नन्दबहादुर भन्छन्ः ‘आत्महत्या भएको भए भित्रबाट चुकुल लगाएको हुनुपर्ने हो नि त । बाहिरबाट चाबी लगाइएको छ । यो भनेको त्यही गणेशले नै मारेर बाहिरबाट चाबी लगाएर भागेको हो । पहिले कुटेर पुगेन । मार्न नै पोखरा ल्याएको रहेछ । चिन्ने जान्ने कोहि छैनन नि त पोखरामा । नत्र कालिकोट, कैलालीमै बस्न सक्थ्यो ।’
गणेशले प्रयोग गर्ने फोन ‘स्विच्ड अफ’ छ । पोस्टमार्टम रिपोर्टपछि मात्रै हत्या वा आत्महत्या भन्ने खुल्ने प्रहरीले जनाएको छ । निरुताको शव पोस्टमार्टमका लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखिएको छ ।